Akụkọ - Banyere ụlọ ọrụ anyị
Companylọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ na-azụ ahịa azụmaahịa na-ejikọ mmepe mmepe, imepụta ngwaahịa, mmepụta na ire ahịa. Ngwaahịa bụ isi na-eji nyocha onwe onye na mmepe nke akwa, dị ka spandex latex (elu mmanụ / enyo elu), na-eji akwa naịlọn na-arụ ọrụ, akwa ahụ dị mma na gburugburu ebe obibi, usoro nrịgo ụzọ anọ dị elu, ma na-ezute ọkọlọtọ nchọpụta CNAS mba ; nsonaazụ ya yiri nke anụ ọhịa latex, mana ọnụahịa ahụ bụ naanị 1/3 nke uwe mkpuchi latex, ka ọtụtụ ndị ahịa nwee ike ịnụ ụtọ ịgba ohu dị mfe nke uwe gel ahụ wetara, wee nwee ahụmịhe mara mma nke tights nke oge a.
E nwere ọtụtụ ụdị uwe anyị dị njikere iyi. Iji kwado ụdị ahụ ọzọ n'ụlọ na mba ọzọ, dị ka usoro F na T, usoro kwesịrị ekwesị bụ 150-180CM n'ịdị elu, ibu ahụ sitere na 40kg ruo 90KG. elu ịcha lathe, nwere ike ime ka nha nha nke ziri ezi ma rụọ ọrụ nke ọma, yana usoro nke ọgbọ CAD nwere ọgụgụ isi na-enye ohere ka ịmegharị omenaala ọdịnala ka mma.
Anyị na-ewere "emebe maka ejiji, na-eme ka ndị ọzọ nwee mmekọahụ" dị ka ebumnuche azụmaahịa, iji mee ka ejiji mara mma ma hapụ ọkwa ahụ ka ọ bụrụ nke na-enweghị isi.
Dị ngwaahịa: ụdị Europe na America dị mfe ma nwee mmekọahụ!
Njirimara ejiji: Uwe ejiji, ejiji sexy. Mee uwe ime ị nwere ike iyi iji mee ka ejiji dịkwuo agụụ mmekọahụ!
Anyị ozi: mee ka ndụ ka mma!
Anyị na-eduga mgbe niile ụzọ sexy na-abụ ihe a na-agbaso na ụlọ ọrụ ahụ. Ugbu a anyị, na-aga n'okporo ụzọ nke ndị ọzọ chọrọ ịga mana agaghị anwa ije! MiaSein ji ezi obi na-eme ka ndị ọzọ na-ahụ maka ọwa na ndị mmekọ iji mepụta akara ngosi ụzọ sexy nke mbụ ụwa!
Ihe anyị rụzuru
Mgbe anyị gbasiri mbọ ike, ọnụọgụ ire ahịa anyị nke spandex latex tights a na-ebupụ na ahịa Europe na America agafeela US $ 1 nde. Nke a bụ ihe ọhụụ ọhụrụ na akụkọ ntolite ahịa anyị. Anyị ga-anọgide na-ebuli ma melite ngwaahịa anyị ka ngwaahịa anyị wee bụrụ ọfụma karịa. Anyị eweregoro onye nrụpụta ọhụụ ga-ewetara anyị ụdị dị mma na nke ewu ewu. Ngwaahịa anyị na-onwe ha dechara si akwa chepụta, mmepụta na ahịa. Nke a na-enye anyị ohere ịchịkwa mma ngwaahịa ka mma, gbanwee nrụpụta n'oge, nụ nzaghachi ndị ahịa maka oge izizi, ma na-aga n'ihu na-arụ ọrụ mmepụta anyị. Ngwaahịa anyị nwere aha ọma n'ụlọ na mba ofesi, na ire ahịa nke ọtụtụ nyiwe n'ụlọ na mba ofesi na-arịwanye elu na-arịwanye elu. Ndị ahịa anyị gụnyere ndị ji ịnụ ọkụ n'obi na-eyi uwe, yana ndị nnọchi anya ụlọ na ndị si mba ọzọ na ndị na-ere ahịa. Ha azụkwala ahịa dị mma. Anyị nwere olile anya na ndị ahịa na ndị na - azụ ahịa na - azụ ahịa ga - ahọrọ ngwaahịa anyị. Ọ dị anyị ka ahịa anyị ree n'akụkụ ọ bụla nke ụwa.